Zambia: ” Noho Ny Antony Ara-Piarovana No Hanoratana Ny karatra SIM Amin’ny Anarana Manokana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2019 2:33 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2012)
Vao haingana no niaiky ny Zambia Information and Communication Technology Agency (ZICTA) – Masoivoho Zambiàna misahana ny Fampahalalam-baovao sy ny Teknolojiam-Pifandraisana – izay mpanara-maso ny serasera sy ireo sampan'asa mifandraika amin'izany, fa natao hananganana tahiry fiarovana momba ireo mpanjifa io tsy maintsy fanoratana ny karatra SIM io.
Tomponandraikitra iray ao amin'ny ZICTA, Ngabo Nankonde, no nanitsy ilay hadisoam-piheveran'ny ankamaroan'ny olona nandositra ilay fanoratana anarana satria voalaza fa natao hanaraha-maso ny mpikambana ao amin'ny mpanohitra sy ny mpitsikera ny governemanta ilay izy, indrindra fa ireo vohikala fampitam-baovao anaty aterineto, tamin'ny filazany fa hikarohana ireo mpanao heloka bevava izany.
Nampian'i Nankonde ihany koa avy eo fa ilaina amin'ny fanenjehana ireo mpanao heloka bevava mampiasa finday ho an'ny raharaha tsy ara-dalàna ilay fisoratana anarana, hahafahana mahita ireo finday nangalarina, ireo mpandefa hafatra manohintohina, hosoka, fandrahonana ary fandrisihana hanao herisetra, ankoatra ireo maro hafa tsy voalaza.
Nanampiany izany koa ny filazana fa napetraky ny ZICTA io fepetra io avy amin'ilay Lalàna laharana faha-15 tamin'ny 2009 momba ny Information and Communication Technology (ICT) – Teknolojian'ny Fampitam-Baovao sy ny Fifandraisana – ary ny Statutory Instrument on the Registration of Electronic Communications Apparatus na ny Didy Fampiharana fanoratana ny fitaovam-pifandraisana Elektronika No. 65 tamin'ny 2011, mba hiantohana fa ny mpaninjara tolotra amin'ny finday rehetra dia manoratra ny karatra SIM an'ireo mpanjifany avy.
Nanazava ny ZICTA fa hotehirizin”ireo mpandraharahan'ny finday tsirairay ao anaty angon-drakitra azo antoka mba ho tsiambaratelo ireo torohay manokana nangonina nandritra ilay hetsika izay natomboka ny volana Septambra 2012, toy ny karapanondrom-pirenena, pasipaoro, fahazoandàlana mitondra fiara na ny karapifidianana .
Ilay vohikalan'olontsotra mpitatitra vaovao, Zambian Watchdog, no vao haingana nitatitra hoe ambanin'ny 500 000 amin'ireo 8 tapitrisa no voasoratra anarana ary efa nanambatra tahiry momba ireo efa nisoratra anarana ny Secret Service na ny sampam-pitsikilovana.
Ny tatitry ny Zambian Watchdog :
Amin'ireo mpanjifa mitotaly valo tapitrisa manerana ny firenena, ampahany kely monja amin'ireo Zambiana, eo amin'ny 300 000 eo ho eo, no efa nanolotra ny mombamomba ny karatra SIM tamin'ireo mpanome tolotra finday rehetra.
Nisy niteny tamin'ny Watchdog fa nisalasala momba ny fisoratana anarana ny Zambiana noho ny fanararaotana tadiavin'ny PF [Patriotic Front] ao amin'ny governemanta ho atao amin'ny nomerao sy ny antontan-taratasy manamarina ny mombamomba azy ireo
Ny herinandro lasa teo, navoakan'ny Watchdog fa ny sampam-pitsikilovana, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe ny Biraon'ny Filoha (OP), dia maka angon-drakitra isanandro avy amin'ireo mpanome tolotra amin'ny finday ary manambatra izany.
Ekipa OP kely iray latsaky ny folo no natsangana mba handrafitra ilay angon-drakitra. Miasa alina izy ireo manomboka amin'ny 6 ora hariva rehefa mody ny mpiara-miasa aminy.
Ho valin'ilay fanambarana nataon'i Nankonde, nizarazara be ihany ny hevitr'ireo mpamaky ny Lusaka Times. Beleg, mpamaky iray no nanoratra (tsy misy rohy manokana mankany amin'ireo fanehoankevitry ny mpamaky) ,
Hatramin'ny voalohany mihintsy io fampanoratana anarana io no efa nampiahiahy, manentana ny olona aho TSY hanao izany raha tiany ny hiaro ny fahalalahany. Tena tinareo ve ny ho arahana maso foana isaky ny manao antso ? Mety aminareo ve ny hametraka ny fiarovanareo ho eny an-tanan'ireo olona tsy manjary toa an'i Ukwa ireo [solon'anaran'ny filoha Michael Sata]?
Tsy misy zavatsoa ho azonao amin'io fanoratana anarana io.
Nefa i Sadakah, mpamaky iray hafa, no nilaza fa :
Mandehana ary ataovy ilay izy. Ataon'ny firenena rehetra io , eny fa na aty amin'ny firenena tandrefana aza. Tsy afaka ny hanana sim ianao raha tsy mampiseho ny karatra mombamomba anao toy ny pasipaoro, fahazahoandàlana hamily fiara sy/na antotan-taratasy hafa manamarina fa ianao marina io. Koa maninona àry ireny olona ireny no matahotra nefa izany foana no ataony rehefa mitsidika firenena hafa izy ? Ao Zambia ihany no ahitàna mpanohitra mahita ny tsy mety anatin'ny mety.
Nitaraina ihany koa ny mponin'ny aterineto ny amin'ny dingana ara-taratasy arahina amin'ny fisoratana anarana ataon'ireo mpanome tolotra sasany. Hoy i @VusumuziS nibitsika :
Ry namana @Airtel_Zambia, maninona moa raha manokatra fisoratana anarana anaty aterineto ianareo ? Tsy afaka nanoratra ny anarako aho androany satria lany ilay taratasy vita printy
ray amin'ireo mpanome tolotra, Airtel Zambia, no nanazava ilay raharaha tao amin'ny Twitter:
@Airtel_Zambia: @VusumuziS Tsy maintsy fenoina amin'ny sora-tanana ilay taratasy ary ampiarahina amin'ny dika mitovy amin'ny karapanondro sy sary
Mpampiasa aterneto iray no nahatsikaritra :
@Mulumba: @VusumuziS eo no mipetraka ny olana. Tokony efa anaty solosaina daholo ny dingana arahina, misoratra anarana & tonga dia ao anaty [angon-drakitry] ny governemanta @GNdhlovu @Airtel_Zambia
Ao aminà firenena izay henjehin'ny polisy fatratra ny antoko mpanohitra sy ny mpitarika azy ireo ary koa ny amin'ny fanehoankevitra anaty aterneto izay hilazan'ny olona malalaka ny fomba fijeriny, fomba fijery izay tandidomina fanagadrana matetika, dia tena ho ady sarotra ny handresy lahatra ny olona hoe resaka madio ny ao ambadik'io fanoratana ny karatra SIM io.